ဈေးကွီးတဲ့ Branded တှကေို လုံးဝ ဝယျမသုံး ဘူးဆိုတဲ့ သရုပျဆောငျ ရှသေမီး ! – Cele Top Stars
ဈေးကွီးတဲ့ Branded တှကေို လုံးဝ ဝယျမသုံး ဘူးဆိုတဲ့ သရုပျဆောငျ ရှသေမီး !
November 10, 2020 By admin Knowledge
ဖွူစငျတဲ့အပွုံးလေးနဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျတဲ့ ရှသေမီးကတော့ နာမညျရနတေဲ့အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈပမေယျ့ လုပျအားခအကုနျမိခငျကိုပဲပွနျအပျပွီးဈေးကွီးတာတှေ ဝယျသုံးလမေ့ရှိဘူးလို့ဆိုပါတယျ။
ရှသေမီးကတော့ “ဈေးကွီးတဲ့ပစ်စညျးတှေ မကွိုကျဘူးလားမေးရငျတော့ ကွိုကျတာပဲလေ နေျာ့ ကွိုကျတဲ့မိနျးကလေးထဲမှာပါတယျ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့အနထေားနဲ့အခွအေနကေိုကွညျ့ပွီးမှ သုံးစှဲတယျ နောငျကလြို့ နာမညျကွီးလာပွီး စီးပှားရေးအဆငျပွလောလို့ ငှပေိုလြှံလာရငျလညျး ဝယျဖွဈသုံးဖွဈမှာပေါ့နျော တျောတျောမြားမြား brand မဟုတျတာတှပေဲ ကိုငျဖွဈတာမြားပါတယျ ” လို့ဆိုထားပါတယျ။
လုပျအားခကို အမကေို့အကုနျအပျတယျဆိုတဲ့ ရှသေမီးကတော့ “ကိုယျအလုပျလုပျတဲ့ပိုကျဆံကို မမေကေို့ပဲ အကုနျအပျတယျ ရှေ တပွားတခပျြမှမသုံးဘူး ကိုငျလညျးမကိုငျဘူး စာခြုပျတှဘောတှခြေုပျကတညျးက ရှလေကျမှတျပဲထိုးတယျ ပိုကျဆံတှမေမေကေို့ပဲပေးပါလို့ပွောထားတယျ မမေပေဲကိုငျတယျ မမေပေဲစစေ့စေ့ပျစပျလေးလုပျပေးတယျ ”
“ရှသေုံးစရာရှိရငျ လကျဖွနျ့ပွီးပွနျတောငျးရတယျ မနျးလေးပွနျရငျလညျး သူငယျခငျြးတှနေဲ့သိပျမထှကျဖွဈဘူး ထှကျရငျလညျး မုနျ့ဝယျစားတာဆိုတော့ ပိုကျဆံတောငျးရပွီ ပထမတဈရကျကတောငျးထားတယျ ဒုတိယရကျကတြော့ သိပျမရှိတော့ဘူး ထပျတောငျးရငျ မနကေ့ယူသှားတယျလေ…
မနကေ့ပဲအမြားကွီးယူသှားတယျလဆေိုတော့ တဈခါတညျးမြားမြားယူသှားလိုကျတယျ ယူသှားတဲ့ပိုကျဆံကလညျး မုနျ့စားဖို့အတှကျပဲ ဘာအဆာပလာသုံးဖို့ဝယျဖို့လညျးမဟုတျဘူး ရနျကုနျမှာဆိုလညျးအဲ့လိုပဲ မုနျ့ဝယျစားဖို့အတှကျပဲ ပိုကျဆံမကိုငျဘူး မမေကေို့ပဲပေးထားတယျ” လို့ဆိုပါတယျ။
မိခငျဆီက ငှထေုတျပုံနဲ့ စာရငျးပွနျတငျရတဲ့အကွောငျးလေးကိုလညျး “တဈခါတဈလေ ကွိုနှိုကျထားတာမြိုးတှရှေိတယျ ၅သောငျးလောကျနှိုကျထားလိုကျတယျ မမေကေ အပွငျသှားဖို့ ၈သောငျးလောကျပေးတယျဆိုရငျ ခိုငျသှားပွီလေ..
နောကျတဈခါပွနျတောငျးဖို့မလိုတော့ဘူး အမြားကွီးပွနျတောငျးပွီးရငျ ပိုရငျလညျး အမကေို့ပွနျအပျတယျ အမြားကွီးစားမိလို့ကုနျရငျ မမေကေစဈတယျ နငျဘာတှစေားထားတာလဲတို့ ဘာတို့ပေါ့” လို့ သူ့အဖွဈအပကျြလေးကို ပွောပွထားပါသေးတယျ။
ရတဲ့ငှကွေေးနဲ့ လောကျအောငျမြှမြှတတသုံးတယျဆိုတဲ့ ရှသေမီးကတော့“ပထမဦးဆုံးရတဲ့အနုပညာကွေးက သုံးသိနျး အဲ့တာဘာလဲဆိုတော့ စလုပျတဲ့အခြိနျပေါ့ ၁၀တနျးဖွပွေီးတဲ့အခြိနျ ရှနျပူ Product တဈခုမှာ ရှိုးပှဲဝငျပွိုငျတညေ့ သုံးသိနျးရတယျ အဲ့တာ ပထမဆုံးရတဲ့လစာပေါ့”
“ပိုကျဆံအမြားကွီးသုံးတဲ့နရောကတော့ မုနျ့စားတာပဲ ဈေးကွီးတဲ့ပစ်စညျးတှေ မကွိုကျဘူးလားမေးရငျတော့ ကွိုကျတာပဲလေ နေျာ့ ကွိုကျတဲ့မိနျးကလေးထဲမှာပါတယျ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့အနထေားနဲ့အခွအေနကေိုကွညျ့ပွီးမှ သုံးစှဲတယျ ကိုယျတှအေတှကျ အရမျးခကျခဲခဲ့တဲ့အခြိနျဆိုတာရှိတယျပေါ့နျော..
ငှရေဲ့တနျဖိုး အခုအခြိနျ ကိုယျတိုငျအလုပျလုပျတဲ့အခြိနျမှာပိုသိလာတယျ အဲ့တာကွောငျ့လိုအပျတဲ့အရာတှပေဲရှဝေယျတယျ နောငျကလြို့ နာမညျကွီးလာပွီး စီးပှားရေးအဆငျပွလောလို့ ငှပေိုလြှံလာရငျလညျး ဝယျဖွဈသုံးဖွဈမှာပေါ့နျော ကိုယျလညျးဈေးကွီးတာတှကွေိုကျတဲ့ထဲမှာ ပါတယျလနေျော တျောတျောမြားမြား brand မဟုတျတာတှပေဲ ကိုငျဖွဈတာမြားပါတယျ ”
“အဓိကစိတျပေါ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျလညျးဆုံးမတယျ ကိုယျ့ရဲ့အခွအေနနေဲ့ရောငျ့ရဲတငျးတိမျရမယျ ကိုယျရှိတာနဲ့လှအောငျသုံးတတျရမယျ လောကျအောငျသုံးတတျရမယျပေါ့ မိသားစုအတှကျလညျး လိုအပျတဲ့နရောတှရှေိနသေေးတာဖွဈတဲ့အတှကျ မိသားစုအတှကျအမြားဆုံးသုံးဖွဈတာပေါ့” လို့ Myanmar Celebrity နဲ့ အငျတာဗြူးမှာဖွဆေိုထားတာပါ။
အဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျတဈယောကျစီတိုငျးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျပါတယျခဗြာ။
ဈေးကြီးတဲ့ Branded တွေကို လုံးဝ ဝယ်မသုံး ဘူးဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် ရွှေသမီး
ဖြူစင်တဲ့အပြုံးလေးနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ ရွှေသမီးကတော့ နာမည်ရနေတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် လုပ်အားခအကုန်မိခင်ကိုပဲပြန်အပ်ပြီးဈေးကြီးတာတွေ ဝယ်သုံးလေ့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ရွှေသမီးကတော့ “ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေ မကြိုက်ဘူးလားမေးရင်တော့ ကြိုက်တာပဲလေ နော့် ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးထဲမှာပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အနေထားနဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှ သုံးစွဲတယ် နောင်ကျလို့ နာမည်ကြီးလာပြီး စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာလို့ ငွေပိုလျှံလာရင်လည်း ဝယ်ဖြစ်သုံးဖြစ်မှာပေါ့နော် တော်တော်များများ brand မဟုတ်တာတွေပဲ ကိုင်ဖြစ်တာများပါတယ် ” လို့ဆိုထားပါတယ်။
လုပ်အားခကို အမေ့ကိုအကုန်အပ်တယ်ဆိုတဲ့ ရွှေသမီးကတော့ “ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပိုက်ဆံကို မေမေ့ကိုပဲ အကုန်အပ်တယ် ရွှေ တပြားတချပ်မှမသုံးဘူး ကိုင်လည်းမကိုင်ဘူး စာချုပ်တွေဘာတွေချုပ်ကတည်းက ရွှေလက်မှတ်ပဲထိုးတယ် ပိုက်ဆံတွေမေမေ့ကိုပဲပေးပါလို့ပြောထားတယ် မေမေပဲကိုင်တယ် မေမေပဲစေ့စေ့စပ်စပ်လေးလုပ်ပေးတယ် ”
“ရွှေသုံးစရာရှိရင် လက်ဖြန့်ပြီးပြန်တောင်းရတယ် မန်းလေးပြန်ရင်လည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သိပ်မထွက်ဖြစ်ဘူး ထွက်ရင်လည်း မုန့်ဝယ်စားတာဆိုတော့ ပိုက်ဆံတောင်းရပြီ ပထမတစ်ရက်ကတောင်းထားတယ် ဒုတိယရက်ကျတော့ သိပ်မရှိတော့ဘူး ထပ်တောင်းရင် မနေ့ကယူသွားတယ်လေ…
မနေ့ကပဲအများကြီးယူသွားတယ်လေဆိုတော့ တစ်ခါတည်းများများယူသွားလိုက်တယ် ယူသွားတဲ့ပိုက်ဆံကလည်း မုန့်စားဖို့အတွက်ပဲ ဘာအဆာပလာသုံးဖို့ဝယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး ရန်ကုန်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ မုန့်ဝယ်စားဖို့အတွက်ပဲ ပိုက်ဆံမကိုင်ဘူး မေမေ့ကိုပဲပေးထားတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။
မိခင်ဆီက ငွေထုတ်ပုံနဲ့ စာရင်းပြန်တင်ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်း “တစ်ခါတစ်လေ ကြိုနှိုက်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ် ၅သောင်းလောက်နှိုက်ထားလိုက်တယ် မေမေက အပြင်သွားဖို့ ၈သောင်းလောက်ပေးတယ်ဆိုရင် ခိုင်သွားပြီလေ..
နောက်တစ်ခါပြန်တောင်းဖို့မလိုတော့ဘူး အများကြီးပြန်တောင်းပြီးရင် ပိုရင်လည်း အမေ့ကိုပြန်အပ်တယ် အများကြီးစားမိလို့ကုန်ရင် မေမေကစစ်တယ် နင်ဘာတွေစားထားတာလဲတို့ ဘာတို့ပေါ့” လို့ သူ့အဖြစ်အပျက်လေးကို ပြောပြထားပါသေးတယ်။
ရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ လောက်အောင်မျှမျှတတသုံးတယ်ဆိုတဲ့ ရွှေသမီးကတော့“ပထမဦးဆုံးရတဲ့အနုပညာကြေးက သုံးသိန်း အဲ့တာဘာလဲဆိုတော့ စလုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့ ၁၀တန်းဖြေပြီးတဲ့အချိန် ရှန်ပူ Product တစ်ခုမှာ ရှိုးပွဲဝင်ပြိုင်တေည့ သုံးသိန်းရတယ် အဲ့တာ ပထမဆုံးရတဲ့လစာပေါ့”
“ပိုက်ဆံအများကြီးသုံးတဲ့နေရာကတော့ မုန့်စားတာပဲ ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေ မကြိုက်ဘူးလားမေးရင်တော့ ကြိုက်တာပဲလေ နော့် ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးထဲမှာပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အနေထားနဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးမှ သုံးစွဲတယ် ကိုယ်တွေအတွက် အရမ်းခက်ခဲခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်..
ငွေရဲ့တန်ဖိုး အခုအချိန် ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပိုသိလာတယ် အဲ့တာကြောင့်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲရွှေဝယ်တယ် နောင်ကျလို့ နာမည်ကြီးလာပြီး စီးပွားရေးအဆင်ပြေလာလို့ ငွေပိုလျှံလာရင်လည်း ဝယ်ဖြစ်သုံးဖြစ်မှာပေါ့နော် ကိုယ်လည်းဈေးကြီးတာတွေကြိုက်တဲ့ထဲမှာ ပါတယ်လေနော် တော်တော်များများ brand မဟုတ်တာတွေပဲ ကိုင်ဖြစ်တာများပါတယ် ”
“အဓိကစိတ်ပေါ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းဆုံးမတယ် ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ရမယ် ကိုယ်ရှိတာနဲ့လှအောင်သုံးတတ်ရမယ် လောက်အောင်သုံးတတ်ရမယ်ပေါ့ မိသားစုအတွက်လည်း လိုအပ်တဲ့နေရာတွေရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် မိသားစုအတွက်အများဆုံးသုံးဖြစ်တာပေါ့” လို့ Myanmar Celebrity နဲ့ အင်တာဗျူးမှာဖြေဆိုထားတာပါ။
အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်စီတိုင်းကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဗျာ။
ကိုယျပိုငျသီခငျြးတှနေဲ့ ပဲရှဆေ့ကျတော့မယျ့ The Voice Myanmar ပွိုငျပှဲဝငျ ထိုကျကွီး !!
သမီးလေးဖွဈသူ သီဆိုဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ မီးမီခဲသီဆိုခဲ့တဲ့ သီခငျြးဗီဒီယိုလေးကို ဝမျးနညျးကွကှေဲစှာ သတိတရ တငျပေးလာခဲ့တဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူ